Uphengululo: 'Isibini esingaqhelekanga' siya kwiFlethi, IsiQalo esingafunekiyo - Itv
Eyona Itv 'Isibini esingaqhelekanga' siya kwiFlethi, IsiQalo esingafunekiyo
UThomas Lennon njengo-Felix Unger kunye noMateyu Perry njengo-Oscar Madison. (Ifoto: Sonja Flemming / CBS)
Ndifuna ukuthanda umqhubi womboniso omtsha we-CBS Isibini esingaqhelekanga , ngenene ndiyenzile. Ndifuna ngokwenene, ndiyayithanda.
Kodwa, makhe sijamelane nayo, kukho into eshukumayo ngokusisiseko ngokwenza umboniso weTV osele ungumdlalo we-Broadway, emva koko imovie, emva koko ngumboniso weTV, lowo usathathwa njengeklasikhi. Yintoni enye enokwenziwa ngale nto?
Kukho konke ukunyaniseka, ndiziva ndingalunganga ngokungamthandi lo mqhubi wenqwelomoya. Lo mzimba une-cast enkulu- uMateyu Perry ( Abahlobo Njengo-Oscar Madison (ongcolileyo), uThomas Lennon ( USean Usindisa Ihlabathi ) njengoFeliksi Unger (ococekileyo ococekileyo) kunye noYvette Nicole Brown ( Ekuhlaleni ), ULindsay Sloane ( Abaphathi aboyikekayo ) kunye noWendell Pierce ( Umboniso kaMichael J. Fox Ukutsiba njengabadlali abadibeneyo. Kubonakala kum ukuba bobabini uPerry noLennon bafanelwe yimbeko ngoku. U-Lennon wayexakwe kakubi njengomphathi okhohlakeleyo kwi-NBC engalinganiyo USean Usindisa Ihlabathi kodwa ngokucacileyo uneechops ezihlekisayo njengoko kungqinwa ngumsebenzi wakhe eReno 911! UPerry, ngokucacileyo uphumelele kakhulu kwiminyaka yakhe elishumi Abahlobo , wayehlekisa kakhulu kwimiboniso yakhe emibini yokugqibela, Qhubeleka kwaye Mnu , Zombini zinqunyulwe iinethiwekhi zazo ngenxa yesizathu esingaziwayo.
Umboniso unomnombo omkhulu kwiqela lokuvelisa nawo. Ivela kwiiTimberman / iBeverly Productions ezinazo Eyokuqala , Icacisiwe kwaye Iinkosi zesini , phakathi kweminye imiboniso emininzi, kuluhlu lwabo lwamatyala. UMvelisi oLawulayo kunye nomdlalo weqonga uBob mihla le, usebenze kwiingoma ezinje Oomama abaphelelwe lithemba kwaye Frasier kwaye umboniso udla ngokuqhayisa uGarry Marshall njengomyili kunye noMcebisi oLawulayo. Kwabo bangaziyo, uMarshall wavelisa kwaye wasebenzisa inguqulelo yoqobo, uthotho lwe1970, wayilungisa ukusuka kumdlalo bhanyabhanya wango-1968 owawukhutshwe kumdlalo kaNeil Simon owaqala ngo-1965. Isibini esingaqhelekanga sabasetyhini noFlorence (Unger) kunye no-Olive (Madison.) U-Oscar noFeliksi: Ukujonga okutsha kwisibini esingaqhelekanga.
Emva kokujonga kuyo yonke le nto unokucinga-le yeyona nto ingenakuphela… kwaye uya kuba ulungile. Kutheni ihlala ibuya? Eyona nto iphambili kukuba iqhubeke ivela kwakhona kuba yenziwe kakuhle, inokuba yinto ehlekisayo. Ngaba iya kuba njalo imeko apha?
Isiseko esisisiseko - amakhwenkwe amabini aqhawule umtshato ahlala kunye- yayinengqondo xa umdlalo wawusenziwa emva phaya kwiminyaka engama-60 sikhumbula ukuba ngelo xesha uqhawulo-mtshato lwalungaxhaphakanga njenganamhlanje. Akuzange kubonakale kungenangqondo ukuba amadoda amabini akwimeko efanayo angabelana ngendawo kunye. Ngoku, kubonakala ngathi kuyothusa kancinci, ngakumbi ukuba la madoda mabini akwiminyaka engamashumi amane kwinqanaba lokuqala lomsebenzi wabo. Kula mqhubi wenqwelomoya, akucaci ukuba uFeliks wenza ntoni ukuze aphile kodwa unikwe ukuba unxibe ngokugqibeleleyo akubonakali ngathi ukuhamba kwemali kuyasokola okwangoku. U-Oscar ngumdlalo kanomathotholo kwezemidlalo kwaye ngokucacileyo wenza umvuzo olungileyo njengoko 'enodonga lwevidiyo' kwigumbi lakhe eliphangaleleyo, eligcwele iiTV ezininzi kunye nethiki yezemidlalo.
Omnye umbuzo oza engqondweni kukuba kutheni u-Oscar, obonakala ngathi ungumntu ozingela emva koqhawulo-mtshato, efuna umntu ahlala naye? Ngapha koko, ubonakala ekhululekile ukuba akasatshatanga kwaye uqhubeka nokubetha abamelwane ababini abohlukeneyo kumqhubi wenqwelomoya. Ke kutheni le nto angafuna ukuhlala nomntu onokuthi agxuphuleke kubudlelwane bakhe obusakhasayo?
Kubonakala kusengqiqweni ukuba u-Oscar angamthatha uFeliks okwexeshana ngelixa uFeliks efuna indawo eyeyakhe, kodwa aba babini bahlalisane ngokusisigxina, kubonakala ngathi akukholeleki. Kwilizwe lokwenyani, banokuba ngabamelwane, kodwa ke yonke indawo esisiseko somboniso iyawa, akunjalo?
Kunye nalo mgca wokucinga, kutheni usebenzisa isihloko kunye namagama abalinganiswa apha konke konke? Kutheni ungakhi umboniso omtsha onesihloko, I-PALS engaqhelekanga okanye Abahlobo abangaqhelekanga (hey, inokusebenza ukusukela oko nguMateyu Perry, akunjalo?!) okanye into enjalo? Ewe, umntu ucinga ngokucacileyo ukuba ukwamkelwa kwegama kuya kutsala isihlwele, ngathi 'Hei ndiyithandile le ngqungquthela kwi-70s ke ndiza kuyikhangela le.' Ndineendaba zakho; abantu ababukele oku kwi-70s badala ngoku kwaye hayi iqela eliza kuthi xhuma kuTwitter nakuFacebook ukuze bahlabe umboniso. (Kodwa kwakhona le yi-CBS kwaye sonke siyazi ukuba idemo yabo indala kunenye inethiwekhi.)
Enye into enomdla apha kukuba kwesi siqendu sokuqala sokubonisa ukungaziphathi kakuhle kukaFeliks kuthethwa ngako kanye-oko kukuthi, into 'yesini' kuthethwa ngayo kwangoko, ehlaziyayo kwaye eyothusayo kancinci . Kuyahlaziya kuba ukuba li-gay kwakungeyonxalenye yencoko nakwifilimu ye-1968 okanye kwi-70s series. UMarshall uye wathetha esidlangalaleni ukuba bekukho ingxoxo eninzi malunga nawo emfihlekweni kodwa ukuba ubhedu lwenethiwekhi ngelo xesha lubeka i-kibosh ngokukhankanya nantoni na kuyo yonke into enxulumene nesini. Kodwa, ngalo mqondiso mnye, kubonakala ngathi kuyinkolelo yokucinga ukuba uFeliksi ulifanasini ngenxa yendlela anxiba ngayo, ingqalelo yakhe kucoceko kunye nokukwazi kwakhe ukupheka izitya ezigabadeleyo. Kukhumbuza kancinci nge Frasier kwaye kaninzi kangakanani abalinganiswa kuloo mboniso ababengamazi uFrasier okanye uNiles bacinga ukuba bayathandana ngenxa yokuthanda i-opera kunye nesherry entle. Ke kanye ngaphandle kwebat, nguOscar ocacisa phandle malunga noFeliks, Ubonakala ngathi ulifanasini, kodwa akakho. Ke loo nto iyatyhalwa isuswe kwangoko kwinqanawa.
Kumqhubi wenqwelomoya kuninzi ekufuneka kusetelwe kwaye le nkqubo ihlala inqabile, njengoko ilapha, kodwa kukho iindawo ezithile ezihlekisayo kule, ubukhulu becala ngoncedo lukaLennon's Felix. Kunzima ukubukela uPerry njengo-Oscar obonakala ngathi unzima, kodwa umntu unokuba nethemba lokuba kwiziqendu ezilandelayo siza kubona ukuba kutheni emkhathalele umhlobo wakhe uFeliks kwaye ulubonisa njani olo thando.
Njengoko besenditshilo, inene, bendifuna ukumthanda lo mqhubi wenqwelomoya kwaye inyani yile, andizange. Kodwa, loo nto ayithethi ukuba andizukunika uthotho ithuba. Uninzi lweemiboniso ezijongeka zilungile ngokwenene zinabaqhubi beenqwelomoya abahlekisayo. Ndiyathemba ukuba yile yenzekayo apha. U-Perry no-Lennon bahlawule iimali zabo zokuhlekisa kwaye ngenxa yoko amalungu ale 'Odd Couple' ngokuqinisekileyo alifanele ithuba lokwenza olu hlobo lwezixhobo lukhunjulwe.
Isibini esingaqhelekanga Inkulumbuso ngoLwesine, ngoFebruwari 19 ngo-8: 30/7: 30c kwi-CBS.
I-Eagleton Poll: UTrump, uClinton uQinisekise abaphumeleleyo kwi-NJ
Uluhlu lwaMadoda oluLuhlu oluBomvu Zonke iindlela zabafazi abangaphumeleliyo kwezesondo Nceda uzikholise
USimon McBurney's 'Ukudibana' luhambo lwasendle
UPstrong's 'Phambili' uziva kakhulu njengeNyathelo eliya emva
ukukhanya kwi-piazza synopsis
Iimfazwe zeenkwenkwezi uhlahlo-lwabiwo mali lokugqibela lwejedi
ukuba ngumnini wabambalwa beqela lezemidlalo
yayiyintoni imfazwe yokuqala ebhaliweyo
Imvelaphi yakho yolwaphulo-mthetho ayihlawulelwa
Iya kuba nini i-rick kunye ne-morty kwi-hulu yexesha lesi-4
iinkampani ezinceda ukulungisa ikhredithi